Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda sare ee Galmudug iyo xubnaha Garsoorka oo ka Hadlay go’aankii ? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda sare ee Galmudug iyo xubnaha Garsoorka oo ka...
Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda sare ee Galmudug iyo xubnaha Garsoorka oo ka Hadlay go’aankii ?
Cabdul qaadir Maxamuud Cilmi Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda Sare ee Galmudug oo Warbaahinta Magaalada Cadaado kula hadlay ayaa iska fogeeyey in uu ka qeyb galay ama laga talo galiyey go’aankii Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Galmudug uu ku sheegay in sharci tahay Xil ka qaadistii lagu sameeyey Madaxweynaha, Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda sare ee Galmudug ayaa yiri: “Kama qeyb galin kulan looga arrinsanaye Xil ka qaadista Madaxweynaha Galmudug, waxan halkaan ka cadeyayaa in aanan waxba ka ogeyn, oo aanan is arag, Hadda kahor waxa uu ii dhiibay warqado uu ku cadeenayo in uu xilka kaga tagay”.
“Habeen Hore waxa uu sheegay bisha labadeedii, xildhibaanada 25-ka ah, madaxweyne ku xigeenka, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenkii 2-kiisa labaad ay dambi galeen uguna yeeray Maxkamadda sare ee Galmudug si calaadda loo waafajiyo, Caawane waxa uu sheegay in Madaxweyne Xaaf uu dhacay, Dowladne jirin, eber ay tahay, Gudoomiyaha waxaan weydiinayaa, Habeen hore miyuu waalnaa mise Caawa ayuu waalan yahay” ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda sare ee Galmudug.
Dhanka kale Garsoorayaasha Maxkamadda Sare ee Galmudug oo ka hadlay dhankooda in laga talo galiyey go’aanka Maxkamadda sare ee Galmudug ayaa iska fogeeyey jiritaanka wararka la xiriira in ay ka fadhiisteen ka maxkamad ahaan Kiisaska Xil ka qaadista ee madaxda Galmudug.
Khilaafka u dhaxeeyo Hay’adaha Fulinta iyo Sharci dajinta Galmudug ayaa kusii baahay Hay’adda Garsoorka, waxayna u muuqataa in hogaanka Maxkamadda sare ee Galmudug ay ku kala qeyb sameen ka Go’aan Gaarista Xildhibaanada Baarlamaanka ee Xil ka qaadista Sameeyey.